IRAN;oo jaamacadda carabtu xiriirkii u jartey isla markaana cambaareyn dusha looga tuurey falkii ay kula kacdey safaarada sacuudiga awgeed. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Dhacdoyinka Caalamka IRAN;oo jaamacadda carabtu xiriirkii u jartey isla markaana cambaareyn dusha looga tuurey...
IRAN;oo jaamacadda carabtu xiriirkii u jartey isla markaana cambaareyn dusha looga tuurey falkii ay kula kacdey safaarada sacuudiga awgeed.
Kulan ay isugu yimaadeen wasiiradda arrimaha dibadda ururka Jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa lagu cambaareeyay jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, iyagoo dhanka kalena taageeray tallaabadii Sacuudigu xiriirka ugu jartay Iiraan.
Guddoomiyaha ururka Jaamacadda Carabta, Nabiil Al-Carabi ayaa ku eedeeyay Dowladda Iiraan inay waddo falal uu ku sheegay daan-daansi iyo cadowtooyo ay ku hayso wadamada Caalamul-Carab.
Sidoo kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuuumadda Isu-tagga Imaaraadka Carabta ayaa isagana ka sheegay shirka in Iiraan ay waddo kicin, ayna doonayso inay dalalka Carabta ka dhex-abuurto qalalaase kuna baahiyo mad-habteeda Shiicada.
Tallaabada ay qaadeen wasiiradda arrimaha dibadda ururka Jaamacadda Carabta ayaa lagu xusay in xukuumadda Iiraan ay ka dambeyso weerarkii weerarkii Saudi Arabia ee Tehran lagu qaaday toddobaadkii hore, isla markaana ay Iiraan jabisay xeerarka caalamiga ah.
Dhanka kale, Kulankii Ururka Jaamacadda Carabta ayaa laga sheegay inay QM u gudbin doonaan baartaanno lagu sameeyay weerarkii lagu qaaday safaaradda Sucuudiga uu ku lahaa magaalada Tehran.
Qaar ka mid ah waddamada Carabta ayaa xiriirkii siyaasadeed u jaray xukuumadda Iiraan, iyagoo taageeraya Sacuudiga, waxaana loo arkaa tani mid cuno-qabteyn ku noqon karta dowladda Iiraan.
Ugu dambeyn, xiriirka Saudi Arabia iyo Iiraan ayaa sii xumaanayay, wixii ka dambeeyay markii Sacuudiga dal-daleen Sh. Nimr Al-Nimr oo Shiico ahaa, kaasoo ay dowladda Iiraan si aad ah uga xumaatay.
Previous articleAxmed Maxamed Siilaanyo oo sheegey in dawladda federalka ahi ay faraha kala baxdo arrimaha Somliland hadii kale ay!.
Next articleKulajekii gaarisa ee hadda ka hor ay weerareen dagaalyahanada AL-shabaab oo maanta dib loo furey.